I-China VSD Vertical Sump Pump (Repalce SP) abavelisi kunye nabathengisi | Impompo yedamei kingmech
Umthamo: 17-1267m3 / h
Isixhobo: Cr27, Cr28, impahla yeliner yerabha
Chwetheza iimpompo ze-VSD zimi nkqo, iimpompo zetyhubhu ye-centrifugal efakwe kwisump yokusebenza. Ziyilelwe ukuhambisa isirries esirhabaxa, enkulu kunye neslurries ezixineneyo. Ezi mpompo azinasidingo salo shaft seal kunye nokutywina amanzi. Banokuphinda basebenze ngokwesiqhelo kwimisebenzi yokutsala engonelanga. I-VSD apha ithetha ukuba i-Vertical Sump Duty Slurry Pump.
elungele imeko yokusebenza kwinqanaba elinzulu. Isikhokelo sokwakha isikhombisi songezwa kwimpompo ngokwesiseko sempompo esemgangathweni, ke impompo inokusetyenziswa okuzinzileyo ngakumbi kunye nobubanzi besicelo, kodwa amanzi okugungxula kufuneka ancanyathiselwe kwisikhokelo.
Iindawo ezifumileyo zohlobo lwempompo ye-VSD zenziwe ngentsimbi enganyangekiyo
Onke amalungu ohlobo lwempompo ye-VSD egxunyekwe kulwelo afakwe i-liner yangaphandle. Zilungele ukuthutha i-slurry engabonakaliyo
Ukunikela iNdibano 一 Iibheringi, ishafti kunye nezindlu zabiwe ngesisa ukunqanda iingxaki ezinxulunyaniswa nokusebenza kwemiphini yecantilevered kwimimandla yokuqala yesantya ebalulekileyo.
Ibandla ligcoba igrisi kwaye itywinwe ngelebyrinths; ephezulu igrisi iyacocwa kwaye ezantsi zikhuselwe ngumlwelo okhethekileyo. Isiphelo esingaphezulu okanye esokuqhuba sokuqhuba luhlobo oluhambelanayo lwe-roller ngelixa i-lower bearing i-roller taper roller kunye nokuseta kwangaphambili kokuphela. Olu lungelelwaniso luphezulu lokuthwala kunye neshafti eyomeleleyo isusa
isidingo sokuhambisa ngaphantsi.
Indibano yeKholamu, iqulunqwe ngokupheleleyo ngentsimbi ethambileyo. Imodeli ye-VSDR ilastomer igutyungelwe
Ubunzima 一 Ngaba ibhawoti elula iqhotyoshelwe kwisiseko sekholamu. Yenziwe ngokunxiba okunganyangekiyo kwe-SP nakwi-elastomer ebunjiweyo ye-VSDR.
Impeller, impelesi zokufunxa ezibini (phezulu kunye nokungena ezantsi) zenza imithwalo ethwele i-axial ephantsi kwaye ineevanes ezinzima zokumelana nokunxiba okuphezulu kunye nokuphatha izinto eziqinileyo ezinkulu. Nxiba ii-alloys ezinganyangekiyo, i-polyurethane kunye nezinto ezibunjiweyo ze-elastomer ziyatshintshana. Isiphekepheke sihonjiswe nge-axially ngaphakathi ekubunjweni ngexesha lendibano ngee-shims zangaphandle phantsi kweenyawo zezindlu. Akukho lunye uhlengahlengiso luyimfuneko.
Isihluzo sePhezulu 一 Drop-in mesh metal; I-snap-on elastomer okanye i-polyurethane yeempompo ze-VSD kunye ne-VSDR. Abahluzi bakulungele ukuvuleka komhlathi.
Isihluzo esisezantsi, isinyithi esineBolter okanye i-polyurethane ye-SP I-elastomer ebunjiweyo kwi-VSDR.
Ukukhutshwa kombhobho 一 Isinyithi se-VSD; I-elastomer egutyungelwe i-VSDR. Zonke iinxalenye zesinyithi ezimanzi zikhuselekile ngokupheleleyo.
Iibheringi ezifakwe emanzini azikho
Ukuyaluzela arrangement Isilungiso sangaphandle sokudibanisa ulungiselelo lokudibanisa sinokufakwa kwimpompo njengokhetho. Ngenye indlela, i-agitator yoomatshini ifakwe kwishafti eyandisiweyo ephume kwiliso le-impeller.
Iimathiriyeli s Iimpompo zinokwenziwa ngezinto ezirhabaxa kunye nezinto ezinganyangekiyo
Metallurgical, Imigodi, Amalahle, Amandla
Egqithileyo IVFD nkqo Froth Pump (Repalce AF)
Okulandelayo: I-WAD Ebuthathaka kwiDuty Pumpry (Repalce L / M)
I-CFD Cyclone feeder Duty Pump (Faka endaweni ye-MC & MCR)
I-API610 OH3 Pump GDS Umzekelo
I-API610 BB4 (RMD) Impompo